Ramaddii “JEG” tiin hojjetaan rammaddii hin arganne hin jiraatu! - | - OBN
Ramaddii “JEG” tiin hojjetaan rammaddii hin arganne hin jiraatu!
[DHRTVO 08 12 09]:- Ramaddii madaallii fi sadarkeessuu gita hojii haarawaa mootummaan hojiirra oolchaa jiruun hojjettoonni baay'een ramaddii dhabu jechuudhaan ololli garagaraa sadarkaa Godinaa fi Aanaaleetti oloolfamaa jira.
Haa ta'uti mootummaan hojjetaa ramaddii malee hambisu akka hin jiraanne qajeelfamni ramaddii ni agarsiisa.
Kana malees qajeelfama ifatti godinaalee fi aanaaledhaaf kennameen hojjetaan ramaddii dhabu naannoo keenya keessa akka hin jiraanne Biiroo Pabliik Sarviisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa dabarsuusaa odeeffanneerra.
Olola sobaan Hojiifi hojjetaa naannoo keenyaa gooluun yaa dhaabbatu!
Biiroo Pabliik Sarviisii fi Misooma Qabeenya Namaa
Qajeelfama Raawwii Ramaddii Hojjettoota Mootummaa Gitoota Hojii Mala Qabxiin Madaaluu fi Sadarkeessuu Hojiitiin Madaalamanii Sadarkeeffaman irratti Gaggeffamuuf Qophaa'e. Amajjii, 2009 Finfinnee
Raawwii Ramaddii Hojjettootaa
1. Hojjetichi gitoota hojii irratti dorgome lamanu irratti yoo filatamuu baate Koreen Ramaddii gita hojii sadarkaa walgitu biraa ykn fedhii hojjetichaatiin sadarkaa gad aanaa ta'e irratti ramaduu ni danda'a.
2. Keewwata kana 7(7) irratti kan ibsamee akkuma jiruutti ta'ee, hojjetan sadarkaa gad-aanaa irratti ramadamuudhaaf fedhii yoo dhabe, Koreen Ramaddii gita hojii biroo argame irratti dorgomsiisee ni ramada.
Haal Dureewwan Ramaddii Hojjettootaa
1. Gita hojichaa duwwaa ta'eef ulaagaalee dandeettiiwwan barbaadamu kan guute.
2. Keewwata kana keewwata xiqqaa (1) jalatti kan ibsame jiraatus, yeroo ramaddiin gaggeeffamu hojjetaan ulaagaalee gita hojii tokkoof barbaachisu guutuu yoo hin dandeenye, Manni Hojichaa madaallii raawwii hojii hojjetichi kanaan dura galmeessisa ture bu'uura taasisudhaan hojjetichaaf itti gaafatamummaan kun yoo kennameef sirriitti ni raawwata jedhee yoo itti amane ramadee hojjechiisuu ni danda'a.Maddi:-BDHKMNO
3766 Views 8/14/17